CEH v10 Gini bu ihe ohuru? Asambodo na-agba akwụkwọ ikike Hacker v10
ECH v10 mara ọkwa, usoro gbasara ịkụ azụ mbanye
Kedu ihe dị ọhụrụ na CEH v10?
Kedu ihe bụ CEH Na-arụ?
Kedu ka m ga-esi lee CEH v10?
EC-Council akọwo CEH v10 - nkwụsị nke iri nke akwụkwọ ikikere akwụkwọ ikike Hacker.
N'ịkọwa n'etiti mmelite ọzọ dị iche iche na nchịkọta nke webinar internet cyber, CEH v10 na-egosiputa akụkụ ọzọ maka asambodo ahụ ka ọ na-ezubere ịnọgide na-eme ka ọ bụrụ ọkwa kachasị mma nke ụwa.
EHH laghachiri na 2003 ma mee ka ọ dị ọhụrụ iji ghọta ọganihu ọganihu. Dịka nwelite, ọgbụgba nke CEH bụ ume ọhụrụ na 2015, na izipụ nke CEH v9. Nke a na-eme ka ọtụtụ modulu mụbawanye na 18 ma nyefee akara ngosi a ma ama karịa ka a na-ekesa.
N'akụkụ ndị ọzọ EC-Council accomplices, Firebrand gara nkwupụta webinar iji mee ka anyị chee na mbụ ha na-ewere gander na ihe ndị a dị oke egwu.
EC-Council na-aga ịmaliteghachi CEH iji mezuo arịrịọ nke ụlọ ọrụ n'ụwa. Nke a bụ ihe dị ọhụrụ na CEH v10:
A modul na Nche Ịntanetị nke Ihe (IoT) nche
Redesigned adịghị ike nyocha ihe onwunwe
Ihe e mesiri ike n'elu igwe ozuzo ikuku, AI na Machine Learning
Ihe ngosi nke CEH na-arụ ọrụ
N'iburu na ihe ize ndụ nke ngwa ngwa IoT ndị a na-adịghị edozi - dị ka ọgụ 2017 si Mirai botnet wakpo - CEH v10 ga-eweta usoro ọzọ na-elekwasị anya na Intanet nke Ihe (IoT).
Usoro a ga - enye ndị ọkachamara ihe ọmụma ha nwere iji nwalee, zipu ma jikwa nchekwa nke Ngwaọrụ IoT.
Ụdị ọhụrụ nke CEH ga-egosiputa ọdịnaya njedebe na enweghị ike. Nnyocha nkwụnye onwe onye bụ ihe bụ isi nke ndụ ndụ ha na v10 ga-eme ka ụba nke iji nyocha adịghị ike nyochaa ọnọdụ ọma. Usoro nyocha ga-ekpuchi ngwaọrụ achọrọ iji nyochaa usoro, ngwá ọrụ ndị na-eji ngwa ngwa eme ihe na otu esi edozi nsogbu.
Ndi okachamara nwere ike icho anya ka ha gbasaa anya n'ile ndi mmadu na-ebuso ndi ozo aka, dika nke elu igwe, AI na akuko igwe. Ndị nchịkwa ga-eme ka ịtụle AI na Machine Ịmụta ịhazi ntule na-enweghị enyemaka na njedebe mgbaru ọsọ iji chebe onwe gị pụọ na mwakpo ọjọọ.
The CEH v10 ga - emecha mara ihe ndị na - eme nchọpụta na usoro nchọpụta nke malware - usoro maka ịhọrọ uru, ebe ọmụmụ na mmetụta nke malware site na ịchọpụta.
Ihe nyocha nke CEH ọhụrụ na-eme ka otu ụlọ ọrụ na-enweghị atụ site na ndị nna nna ya:
Ajụjụ ole na ole: 125
Oge nyocha: Oge 4
Usoro nyocha: Otutu Nhọrọ
Ule Ngosipụta: ECC EXAM, VIEW
Ntụle nyocha: 312-50 (ECC EXAM), 312-50 (VUE)
Onye na-agba ọsọ na-agba akwụkwọ (CEP) bụ nke na-agba akwụkwọ. Ọ bụ ihe nlele na nlezianya ezi uche, ndị nwere ike ịnweta ikwupụta ozi ha bara uru site n'itinye ihe ndị a kụziri n'ime CEH aka ịma aka nchedo.
Na ohere ị nwere na CEH, ị ga-enwe ike ịnọdụ ala n'ule ahụ na EC-Council na-atụle nke a ga-anwale ihe nke njigide nke ike ha. Ihe nlereanya bara uru bụ nyocha nke ngwa 6 nke a chọrọ iji ṅomie ezi netwọk ụlọ ọrụ site n'iji igwe arụ ọrụ arụ ọrụ, netwọk na ngwa.
Ihe nyocha nke a na-eme na CEH dị iche na ule nke CEH ugbu a ma bụrụ ọnụ ụzọ mepere emepe iji mee ka ịchọta nghọta ha. Ka ikuku site n'ule ule a, ị ga - ahụ:
Gosi nghọta nke vekrans ọgụ
Mee nyocha nke netwọk iji chọpụta ígwè na-adịghị ike na netwọk.
Mee ọkọlọtọ ọkọlọtọ OS, njikwa, na njirimara onye ahịa.
Mee nhazi usoro, steganography, ọgụ nchịkwa, na ikpuchi egwu.
Mara ma jiri ọrịa, ikpuru kọmputa, na malware mee ihe.
Na-eme ka a na-atụgharị ihe.
Na-eduga ọtụtụ ihe nkesa weebụ yana ngwa ngwa weebụ tinyere gụnyere ndekọ ndekọ, mgbakọ njedebe, XSS, na ihe ndị ọzọ.
Mee nbuso infusion SQL.
Na-eme ụdị iche iche nke mkpuchi cryptography.
Mee nlezianya nyocha iji mara nchebe nchebe nchebe na netwọk mmekọrịta, usoro ntọala na usoro njedebe
Ihe omuma nke uzo nke ubochi nke CEH bu:
Ọnụ ọgụgụ nke Ihe Ịma Aka Bara Uru: 20
Ogologo oge: 6 awa
Usoro nyocha: iLabs Cyber ​​Range
Ihe na-aga n'ihu: 70%
Ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịga megide ma mezuo CEH v10 ma, Ọ BỤ na-agagharị ugbu a iji sonyeere usoro mmemme ọhụrụ ahụ iji mee ka ọmụmụ ihe CEH dị ọhụrụ. Nọrọ na-ege ntị maka ụbọchị nkwụsị nke maka CEH v10.
naanị 5 Days
Kedu ihe mere ị ga-eji nweta ihe ndekọ CISSP?